NK | तुलसीपुरमा भिटेन,मिलन र प्रतापको भव्य कन्सर्ट हुदै
प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०७८, आईतवार
दाङ । हिन्दु नेपालीहरु महान पर्व विजयादशमीको अवसर पारेर असोज २३ गते दाङको तुलसीपुर अरनिको मैदानमा अनाथ बालबालिका सहयोगार्थ एकदिने लाइभ कन्सर्ट आयोजना हुने भएको छ । कार्यक्रममा केन्द्रिय स्तरका ख्याति प्राप्त कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने छ ।
दाङमा रहेका अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विजया दशमीको छेको पारेर एकदिने कन्सर्टको आयोजन गर्न लागिएको अध्यक्ष पुष्प जिएम् ले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको आयोजक पि.एम्. इन्टरप्रजेज हो भने सह अयोजक के.एम्. फिट्नेस सेन्टर हो ।